Taariikhda My Butros » 4 Dabci xoogbadane Of Happy Xiriirka
Weligaa ma waqti u qaatay si ay u muujiyaan sida ugu korkiisa Dabeecada saamayn noloshaada jacayl u fiican ama waxa daran? Waxaa jira waxyaabo aad samayn isag oo saameyn in xiriirka hab wanaagsan, siday u jiraan qaar ka mid joogta ah oo noqday nooc ka mid ah nooca labaad ee aad u, laakiin wado aad nuts rafiiq. Inkastoo kuwa ugu horeeya waa in nafo, waxaa laga yaabaa inaad ka fiirsatid takhalusaya nooca labaad ee caadooyinka iyo jimicsi dhaqanka qaar ka mid ah oo kaliya xiriirka faraxsan guulaysto inuu ka soo leexdo galay caado.
1. Ula dhaqan lamaanahaaga si xushmad leh
Ixtiraam waa qayb ah xiriirka kasta oo ay leeyihiin waa in, in aynu ka hadlaynaa tuura dugsiga sare, ah mid u taagan habeen ama shukaansi kumeelgaar ah. Daweynta lamaanahaaga si xushmad leh noqdo muhiim ah markii in xiriir aad u daran, gaar ahaan haddii aad rabto in aad u celin guur noloshooda oo waarta. In la muujiyo ixtiraam shariig inay ka muujinaya jacaylka, oo keliya sida aan daaweynta lamaanahaaga si xushmad leh dhab ahaantii ka dhigan tahay liso Diido,, aad kalsooni la'aan ama aqbalaada.
Ixtiraamida lammaanahaaga ka dhigan tahay iyaga oo tusaya aad u jeclahay ee cidda ay yihiin. Waxaad yeelan kartaa fikrado kala duwan oo ku saabsan nolosha, laakiin taasi kama dhigna in aad xaq u leedahay inaad isaga ixtiraam / iyada. Tani waa wax aad niyadda ku hayaan gaar ahaan marka ay laba idinka mid diiddan yihiin wax. Dagaalka-, xataa kuwa ugu Fudud, waa daqiiqado markii lamaane inta badan iloobaan ay yihiin run ahaantii koox oo waa u dhaqmaan sidii oo kale.
2. Aado socod gacanta ee gacanta
Caadadani ku yeelan doonta saamayn wayn ku leeyahay jawigaaga, on caafimaadkaaga iyo sidoo kale on aad xiriir. Waa fursad ku helaan jimicsi qaar ka mid ah ka hor ama ka dib markii maalintii yah xafiiska iyo fursad ay waqti qiimo leh ku qaataan sidii laba qof oo. Gacanta Socodka in gacanta ayaa sidoo kale kor u wada hadal fiican sida ay haatan tahay waqtiga aad ku guulaystaan ​​in ay jebiyaan oo aad howl maalmeedka iyo madaxaaga wada cadda.
3. Bixiya fiidkii wada ka fog TV
Daawashada TV waxaa laga yaabaa in mid ka mid ah kuwa ugu caansan (haddii aan ugu of dhan) hawlaha waqtiga firaaqada ah, laakiin waxaa hubaal ah ma uusan kaa caawin sidii laba qof oo. TV ayaa dhab barbaro dareenka oo dhan, Ku-simaha oo uu goolhaye isgaarsiinta ah. Sidee baad u suurto gal la xiran kartaa midba midka kale halka daawashada TV? Sidee ku saabsan deminta TV (ugu yaraan waqti ka waqti), iyo waqti qiimo leh ku qaataan sidii laba qof oo? Waxaad la hadli kartaa waxa aad maalintaas qabatay, aad snuggle karto fadhiga, xasuuso maalinta ugu horeysa ama aad qorshaynayso in aad fasax soo socda. Wax kasta oo ay diiradda saartaa laba idinka mid tagaa.
4. Xalida fiican u lammaanahaaga
Sidee ku saabsan keeno qaxwaha in ninkaaga subaxdii? Ama wacaya hooyadiis u karinayo iyo karinta uu saxan carruurnimada jecel? Sidee ku saabsan gadashada gabadha aad wada socotaan iyada cake jecel? Ama xitaa ka fiican, waxaa la dubayo iyada? Waxa aanu lahayn inuu yahay wax weyn. Gacmo ka fiican Small muujiyaan dareenkooda jacayl iyo ixtiraam aad. Ka bixida qoraalo ay is ama qorid inay idinku isaga seegi / iyada mar mar ayey tahay caadooyinka saameyn ku yeelan kara hab wanaagsan oo aad xiriir.